MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward MPT က နိုင်ငံအတွင်း ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်အောင်မြင်နေကာ ပြိုင်ဆိုင်မှုအရှိန် မြင့်တက်လာသည့် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ The Voice Myanmar အတွက် မဲပေးမှု အစီအစဉ်သစ်နှစ်ခုနှင့် ဆုလက်ဆောင်များကို စတင်မိတ်ဆက် - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT က နိုင်ငံအတွင်း ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်အောင်မြင်နေကာ ပြိုင်ဆိုင်မှုအရှိန် မြင့်တက်လာသည့် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ The Voice Myanmar အတွက် မဲပေးမှု အစီအစဉ်သစ်နှစ်ခုနှင့် ဆုလက်ဆောင်များကို စတင်မိတ်ဆက်
(ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၇ ရက်) – ယခုတစ်ပတ် မှစတင်ကာ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲအား တစ်ခဲနက်အားပေးနေကြသည့် ပရိတ်သတ်များအတွက် မဲအရေအတွက် ၅၀ လျှင် ၇၈၈ ကျပ် နှုန်း၊ မဲအရေအတွက် ၁၀၀ လျှင် ၁၅၇၅ ကျပ်နှုန်း အသီးသီးဖြင့် အမြောက်အများမဲပေးနိုင်မည့် ပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ်ရာ voting packs အစီအစဉ်သစ်နှစ်ရပ်ကို MPT မှ စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ voting packs အသစ်များမှာ သုံးစွဲသူများအတွက် ယခင်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရုံ သာမက နိုင်ငံတွင်း ရုပ်သံမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံးဖြစ်သော သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တွင် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အမာခံပရိတ်သတ်များအနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့နှစ်ခြိုက် အားပေးသော ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက်ချင်းစီကို မိမိတို့နှစ်သက်သလောက် မဲပေးနိုင်မည်လည်း ဖြစ်သည်။
ရယူနိုင်သည့် voting packs အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Pack 1 ၇၉ ကျပ် ၅ မဲ
Pack2၁၅၈ ကျပ် ၁၀ မဲ
Pack3၃၁၅ ကျပ် ၂၀ မဲ
NEW! Pack4၇၈၈ ကျပ် ၅၀ မဲ
NEW! Pack5၁၅၇၅ ကျပ် ၁၀၀ မဲ
ထို့အပြင် MPT သုံးစွဲသူများအတွက် အံ့သြဖွယ်ရာ ဆုလက်ဆောင်များအဖြစ် တိုက်ရိုက် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့် မှုများကို စတူဒီယိုတွင်း အခမဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုခွင့်များ၊ ဒေတာအစီအစဉ်များ၊ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone X မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအပါအဝင် အခြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အထူးအစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မဲပေးကြမည့် MPT သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မဲပေးရန်အတွက် သီးသန့်လုပ်ဆောင်ထားသော thevoice.mptvote.com အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် သော်လည်းကောင်း၊ *9011# သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာ မဲပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆုလက်ဆောင် အစီအစဉ်သစ်တွင်လည်း ပါဝင် ဆင်နွှဲနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ဖြစ်သူ Mr. Reizo Umeda က “ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်တွေကို ရောက်ရှိဖို့ နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ အဆုံးသတ်စင်မြင့်မှာ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပြီး အိပ်မက်တွေကို လှမ်းကိုင်ဆုပ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင် နေကြတဲ့ အရည်အချင်းပြည့်မီသူ အဆိုရှင်လောင်းတွေကို ပရိသတ်တွေက စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ပြီး မဲပေးနေကြတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ပေါ်မှာ မဲပေးကြသူတွေရဲ့ အံ့သြလောက်စရာကောင်းတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေရရှိလာတာနဲ့ အတူ MPT အနေနဲ့ ထပ်တိုး မိတ်ဆက်မှုအဖြစ် မဲအစောင်ရေ ၅၀ နဲ့ ၁၀၀ ရရှိနိုင်တဲ့ vote packs တွေကိုထပ်မံ မိတ်ဆက်လိုက်ပြီး အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် လွယ်လွယ်ကူကူ မဲပေးရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလွန်းတဲ့ ဆုလက်ဆောင်တွေကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါပြီ။” ဟု ပြောကြားသည်။
ယခုတစ်ပတ်တွင် အဆိုပါအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှ မဲပေးခဲ့ကြသူများအနက် ကံထူးရှင် ၁၅ ဦးကို ကျပန်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ ၁၀ ဦးအတွက် အင်တာနက်ဒေတာ 2G ကို လက်ဆောင် ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိနေသည့် အထူးကံထူးရှင် ၅ ဦးမှာမူ အဆိုပါလက်ဆောင်အပြင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ MRTV-4 စတူဒီယိုအတွင်မှ တိုက်ရိုက် ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်မည့် လာမည်အပတ်ပွဲစဉ်အသစ်ကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် လက်မှတ် နှစ်စောင်စီကိုလည်း ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ Mr. Umeda က “နောက်လာမယ့် ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်တွေအတွက် စိတ်အား ထက်ထက်သန်သန် နဲ့ အားပေးနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံး မိုဘိုင်းလ် ကွန်ရက်ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် မဲပေးတဲ့အစီအစဉ်အသစ်တွေနဲ့အတူ ကိုယ်အရမ်းကြိုက်ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ တိုက်ရိုက်သီဆို ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကို တစ်ဝကြီးမဲပေးနိုင်ပါပြီ”ဟု ပြောကြားသည်။
ယှဉ်ပြိုင်မှု အရှိန်အဟုန် မြင့်တက်လာသည်နှင့်အညီ ယခင်တစ်ပတ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်လေးဦးဖြစ်သော Thaw Di, Hnin Eaindray Shin, Khaine Myael Thitsar နှင့် Ye Naing Htoo တို့က လာမည့် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရေးအတွက် အခွင့်အရေးရရှိပြီလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်တွင်မူ အခြားကျန်ရှိနေသော ပြိုင်ပွဲဝင် ၈ ဦးဖြစ်သည့် Ce Ce, IP Shen Paung, Ngwe Soe, Pyae Say Maung, Grace Monica, Wai Hnin Maung, Andrew နှင့် Mark Jason တို့အနေဖြင့် ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်သို့ ထပ်မံတက်လှမ်းခွင့်ရရှိ ရေးအတွက် လေးဦးအဆင့်သာ ကျန်ရှိမည်ဖြစ်သဖြင့် အပြင်းအထန် ကြိုးစားသီဆို ယှဉ်ပြိုင်သွားကြရမည် ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါက Hot Line နံပါတ် ၁၀၆ (သို့မဟုတ်) MPT ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ facebook.com/mptofficialpage သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကို MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်း တနင်္ဂနွေနေ့ည ၉ နာရီတိုင်းတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသလျက် ရှိပါသည်။